Pleading not guilty in Insein
The Darkness we see
u wathawa pandi
nyan nyan htun
ဒေါက်တာမြင့်နိုင် dr myint naing
aye min phyo
ma hla myaing
u oat ma
အရှင်ဣဿရိယ (ခေါ်) ဦးဇင်းဂျောင်းဂျောင်း
" ငှက်ဖမ်းသမား "
21 April 2012(စိန်ပေါကျောင်းသားဟောင်းများအားဂုဏ်ပြုပွဲ)
9 june 2012(နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်)
until all are free , we are all imprisoned
ကသာထောင်ထဲကနေ NLD ကို လေသေနတ်နဲ့ပစ်
ဇူလိုင်လ၊(၃)ရက် ၌ လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်း
အင်းစိန်ထောင်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ(burma vj ,popular)
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနဲ့ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ
ပြည်သူ့ သူရဲကောင်းများနေ့ 
၂၆-၆-၁၂ နေ့ အထိ ကျန်ရှိစာရင်း
“ကစားမလား။ နားမလား။” (စိမ်းခက်စိုး)
u aung saw oo
mg aye win
ကျနော်နဲ့ ကိုဝင်းတင် April 22, 2014 ကိုဝင်းတင်ကို သဘောထား တင်းမာတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ သဘောထား တင်းမာတာ မဟုတ်ဘူး ။ ယုံကြည်ချက ...
Posted Apr 22, 2014, 6:26 PM by lin ker
Posted Apr 21, 2014, 11:29 PM by lin ker
ခေတ်သစ် လဂွန်းအိန် Aung Zin Latt++++++++++++++“အရှင့်သား ကွမ်းတရာကျွေးဖူးတဲ့ ကျေးဇူးကိုဆပ်တဲ့အနေနဲ့ အကြံပြုစကားတခွန်း ဆိုပါရစေ ...
Posted Apr 21, 2014, 10:51 PM by lin ker
ကိုစိန်ဝင်း မရေးဖြစ်တဲ့ ဆောင်းပါး (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်) Nayt Thit ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၄ | moemaka (အိပ်ရာပေါ်မှာ ပက်လက် လှဲနေရာက ကိုစိန်ဝင်း စကားထန်ထန် တစ်ခွန်း လှမ်းပြောတယ ...
Posted Apr 21, 2014, 9:00 PM by lin ker
ပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်ရမယ် (၂) - ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်လက်ထက် စစ်ထောက်လှန်းရေးများ တန်ခိုးထွားစဉ်က နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသ ...
Posted Apr 21, 2014, 8:18 PM by lin ker
Night(Artist Htein Lin) My recent work called Night. I went to Insein Jail stayedaweek last month as Dhamma workers for inside meditation course . I took the shirt into Insein Jail to ...
Posted Apr 13, 2014, 2:09 PM by lin ker
the photo with painting which i did in Prison Htein Lin 2005, I was staying my friend ,Myo Win house in Yangon after released from Prison. the photo with painting which i did in PrisonHtein LinZaw Lynn ...
Posted Mar 16, 2013, 2:41 PM by lin ker
Artist Htin Lin _Solo Painting Exhibition
Posted Sep 11, 2012, 5:02 PM by lin ker
Artist speaks about time spent in jail By PinkyVolume 33, No. 643September 10 - 16, 2012Artist Htein Lin and River Gallery owner Gill Pattison pose in front of one Htein Lin’s paintings on September4...
Posted Sep 11, 2012, 4:53 PM by lin ker
ကိုထိန်လင်း၏ လက်ရာ...... LIFE IN THE CELLS ကိုထိန်လင်း၏ လက်ရာ...... LIFE IN THE CELLS
Posted Mar 16, 2013, 2:44 PM by lin ker
Posted Apr 13, 2014, 1:09 PM by lin ker
Posted Apr 13, 2014, 10:41 AM by lin ker
Posted Aug 4, 2013, 6:57 AM by lin ker
သတိမေ့တတ်တဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရ အင်းစိန်ထောင်မှာ ​ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ​၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် အရှင် ​ဦးဂမ္ဘီရ ​ခေါ် ...
Posted Dec 11, 2012, 7:09 PM by lin ker
Posted Aug 26, 2012, 6:20 PM by lin ker
“ရှက်လိုက်တာ လူဖြစ်နေလို့ လိပ်သာဆို ခေါင်းမထွက်တော့ဘူး” ရှက်လိုက်တာ လူဖြစ်နေလို့ … (Aung Saw Oo) Posted by shwepyisoe on Feb 26, 2012 in ဆောင်းပါး | No Comments Click here to view file ...
Posted Jul 7, 2012, 9:25 PM by lin ker
u wi ya thu
Posted Apr 7, 2013, 7:22 PM by lin ker
သမိုင်းရဲ.တရားခံဟာ ဦးဇင်းပဲလို.လက်ညိုးထိုးခံရမှာကိုအင်မတန်ကြောက်တယ် Baydar Lam"အထူးသဖြင့်ခေတ်နောက်ပြန်လှည့်တဲ့အခါမှာသမိုင်းရဲ.တရားခံဟာ ဦးဇင်းပဲလို.လက်ညိုးထိုးခံရမှာကိုအင ...
Posted Mar 31, 2013, 5:42 PM by lin ker
၁၉၈၉-၉၀ ကာလတွေတုန်းက အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ အတူနေခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းတွေ ဆုံကြတဲ့ပွဲ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318041631657563&set=pcb.318042311657495&type=1&theaterHnin Hnin Hmway၁၉၈၉-၉၀ ကာလတွေတုန်းက အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ အတူနေခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းတွေ ဆုံကြတဲ့ပွဲ ၁၂၊ ၄၊ ၂၀၁၃။ ရန်ကုန်။Dun Hla မကြည်လေး မေမေသန်း မမဒုံ အံတီခိုင် အံတီတိုး ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် နှင်းနှင်းမွှေး မိုးကလျာ ရွှီး အံတီသိင်္ဂီမဆွေ လှိုင်လေး နဲ့ ဝါ၀ါ တို့ ရေ ဗမာပြည်ရဲ့ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေလို့ ..။
Posted Apr 13, 2013, 1:28 PM by lin ker
‘လူမိုက်အလိုရှိသည်’ ကြေငြာခေါ်ယူသော စာရေးဆရာနှင့်ထောင်ထွက် နိုင်ငံရေးသမား ကျောင်းသားလူငယ် (နိဒါန်း)သည်ကြော်ငြာ၊ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်တော့ သူ အတော့်ကို အံ့အား သင့်သွားသည်။ အိမ်ရှေ့ ခြံစည်းရိုး မှာ ချိတ်ဆွဲ၍ ဗြောင်ကြေညာထား သောကြော်ငြာကား မြင်ရသူ ထူး ဆန်းစွာ အံ့အားသင့်စရာ။ ”လူ မိုက်အလိုရှိသည်”တဲ့။ ကြော်ငြာ ချိတ်ဆွဲထားသော အိမ်ကား စာ ရေးဆရာတစ်ယောက်၏ အိမ်ဖြစ်သည်ကို သူသိသည်။ပြောရလျှင် သူ တစ်နေ့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဘဝဖြင့် ထောင်မှ လွတ်လာသည်။ အိမ် ပြန်ရောက်ပြီး နောက်နေ့လောက် မှာ သူ့ဖခင်သည်သူ့အား အကြ ...
Posted Mar 6, 2013, 8:08 PM by lin ker
Showing posts 1 -2of 83. View more »
ye min htun
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်လူသတ်မှုကြီး by Ye Min Tun on Sunday,5December 2010 at 09:43 ·နိုင်ငံရေးသမား ဆိုလျှင် အဖမ်းခံရမည်။ အဖမ်းခံရလျှင်တော့ မဆလ လက်ထက်တွင် မလွယ်လှပါ။ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အဖမ်းဆီးခံရသောလူများ၏ ဘ၀သည် ပျက်ဆီးသွားသည့် သတင်းများကိုလည်း ကျနော် ငယ်ငယ်ကပင် ကြားသိထားရပါသည်။ ကျနော်သိသော နိုင်ငံရေးသမားကြီး အလံနီရဲဘော်ဟောင်း ဦးရီမှိုင်း(ခေါ်) ဦးညိုမိုင်းကိုလည်း နိုင်ငံရေး အခါကြီးရက်ကြီးများ နီးလာလျှင် E2000 ကားအရှည်ဖြင့် လာရောက် ဖမ ...
Posted Aug 8, 2012, 6:18 PM by lin ker
စစ်ခွေးတိုက် (သို့မဟုတ်) ဟောင်ကောင် (၄) by Ye Min Tun on Thursday, 10 May 2012 at 03:39 ·ဆိုးဝါးလှတဲ့ စစ်အစိုးရ၏ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ ရပ်တည်ခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ ပေးဆပ်မှုများ ဖြစ်ရပ်မှန်များ ကို မသိလိုက်တဲ့ ပြည်သူများနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ ထောင်တွင်းက နှိပ်စက်မှုဒဏ်များစွာ ခံခဲ့ရပြီး လွတ်မြောက် လာတဲ့အခါ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆုံးပါးသွားရှာတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း ရဲဘော်ရဲဖက် နဂါးလေး(ခေါ် ...
Posted May 12, 2012, 5:39 AM by lin ker
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း(aappbမှတ်တမ်း) Subscribe to posts posted May 12, 2012, 9:12 AM by lin ker Page 1 of4Political Prisoner Profile AAPP CASE NO.: 0106 NAME OF POLITICAL PRISONER: Ant Bwe Kyaw GENDER: Male Ethnicity: Burmese DATE OF BIRTH: November 27, 1966 Age: 42 RELIGION: Buddhist PARENTS NAME: U Kyaw Shwe(aka)Writer Min Kyaw and Daw Tin Tin Win EDUCATION: M.A. Burmese OCCUPATION: Writer, 88 Generation Students Group and former political prisoner LAST ADDRESS: Building No.(257), Room No.(13), 3rd floor, Ward No.(2) Yankin Tsp., Rangoon ARREST DATE: August 22, 2007 PHOTO DATE: SECTION OF LAW: Section 505 (b) , 130 (b), 17/20, 33 (a), 17/1, 24/1, 32 (b)/36, 6, 5/96 (Section4...
Posted Mar 30, 2013, 9:52 PM by lin ker
ထောင်ကလွတ်တဲ့နေ့ကသာ ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် မိခင်နှင့်ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောကြားနေတဲ့ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်က သူ့အနေနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေးကို မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှပါတီတည်ထောင်ခဲ့ရင်လည်း ပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပေါ်ပြူလာနယူးစ်သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ By: Popular Myanmar News Journal Posted by minyekyawswar8888
Posted Feb 17, 2013, 10:02 PM by lin ker
Posted Aug 7, 2012, 2:31 PM by lin ker
tayar min wai
မိတ္တဗလ ဋီကာ လူတွေက ရေစိုပြီး ပြဲနေကြတယ် သူတို့နေတဲ့ မြို့တော်ကလည်း ဘယ်အချိန်စိုက်စိုက် မပွင့်ဘူး ဆိုတဲ့ မျက်နှာနဲ့။ တစ်ယောက်ယောက်က တကျွိကျွိပြုံးလိုက်သံကို ကြားသားပဲ ဒါပေမယ့် ငါ့ရဲ့ အ . အာ ..၏ ..ဤ အိပ်မက်လေးကို နွားကျွေးပစ်ဖို့ ထွက်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ခရီးတည်း ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်လှေကိုယ်စီးပြီး ပျံသန်းခဲ့ကြတာပါ ငါရယ် ကောင်းကင်စော်နံတဲ့ လူတွေရယ် နောက်ဆုံး ကွဲသွားတယ်
Posted Mar 20, 2013, 8:55 PM by lin ker
ဆက်ထုံး “ အဝေးကြီး ဝေးရစေမယ် ” တဲ့ ပင်လယ်က သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖွင့်ပြီးပြေးတယ် မီးပြတိုက်က ကဆုန်ပေါက်ပြီး ပြေးမလိုက်ပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ အလင်းလဲ့မှုန်နဲ့ ပင်လယ်သားပေါက်ကလေးရဲ့ ဖွင့်ပွဲကို ….. ပြည့်စုံစေလိုက်တယ်။ ။ တာရာမင်းဝေ ၂၀၀၀ဝ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ မဟေသီ
Posted Mar 20, 2013, 8:54 PM by lin ker
ကိုအေးမင်းဖြိုး Aung Pan ထောင်ပြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့ ပစ္စည်းကိုမတရားသိမ်းယူပြီး အင်းစိန်ထောင်မှူးမောင်မောင်ကြီးမှ အကြီးအကျယ်ရိုက်နှက်။ မနေ့ကညက ဘူသီးတောင် ထောင်မှနေ ၍သာယာဝတီထောင် သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ ရတဲ့ အေးမင်းဖြိုးသည်မနေ့ကညက အင်းစိန်ထောင်မှာ တညဝင်နားရပါတယ် ။အင်စိန်ထောင်တွင်နားနေတုန်းထောင်းမှူး မောင်မောင်ကြီး ကရှာဖွေရေးလုပ်တော့ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းတယ်၊ ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းတော့ ကိုအေးမင ...
Posted Aug 1, 2012, 2:30 PM by lin ker
mg wun tha
နိုင်ငံရေးလုပ်ရမှာ မကြောက်ပါနဲ့ မောင်ဝံသကြောက်စိတ်ဟာ လူသားရဲ့ မွေးရာပါပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ မနုဿဗေဒ ပညာရှင်တွေက ဆိုတယ်ဗျ။ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ခွန်အား အင်မတန် ကြီးမားတဲ့ ဒိုင်နိုဆောတို့လို သတ္တဝါကြီးတွေ၊ ရှည်လျားတဲ့ အစွယ်ရှိတဲ့ ဆင်လိုသတ္တဝါကြီးတွေ၊ ခွန်အားရော၊ လျင်မြန်ဖျတ်လတ်မှုပါရှိတဲ့ ကျားတွေ၊ ခြင်္သေ့တွေလို သတ္တဝါတွေ၊ အင်မတန် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေလို၊ ကင်းလို သတ္တဝါတွေအလယ်မှာ အဲဒီစွမ်းပကားတွေ တစ်ခုမှမပါဘဲ မေ ...
Posted Aug 10, 2013, 7:18 PM by lin ker
စွပ်စွဲပြစ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ပြန်စဉ်းစားကြပါဦး (မောင်ဝံသ) စွပ်စွဲပြစ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ပြန်စဉ်းစားကြပါဦး (မောင်ဝံသ) by Maung Wuntha on Wednesday, 22 August 2012 at 10:50 · အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကို စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မယ့်ကိစ္စစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က လွှတ်တော်ဥပဒေတွေကို အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှု တစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်း မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လှမ်းပြောတယ်။ တရ ...
Posted Aug 22, 2012, 7:10 PM by lin ker
ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်၊ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်၊ကိုသန်းဇော် ယနေ့လွှတ်ပေးမည့်အကျဉ်းသားများအနက်နိုင်/ကျဉ်းထဲမှ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်နှင့် က ...
Posted Jul 2, 2012, 8:10 PM by lin ker
Untitled Post Sein Lann Yayကိုဌေးမြိုင်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကိုဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့လို သဘောမထားနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ရန်သူလည်းရှိတယ်။ ရဲဘော်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို တပြေးညီ မေတ္တာ မထားနိုင်ပါဘူး။
Posted Aug 5, 2012, 7:31 AM by lin ker
Untitled Post စစ်သင်္ဂျီုင်း၊ သခင်အုန်းမြင့်နှင့်ဆောက်လက်စအတွေးများ (မျိုးမြင့်ချိ) အဘဦးအုန်းမြင့်ကွယ်လွန်တဲ့ရက်က ရေးဖြစ်တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။by Myo Myint on Monday, 23 July 2012 at 15:09 ·စစ်သင်္ဂျီုင်း၊ သခင်အုန်းမြင့်နှင့်ဆောက်လက်စအတွေးများ (မျိုးမြင့်ချိ) ၂၀၁၀ က ရေးဖြစ်တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ “လူထုကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ အစိုးရတရပ်ရပ်ပေါ်လာပြီဆိုပါတော့ဗျာ၊ အဲဒီအစိုးရကနေ ခင်ဗျားတို့မြို့ကလေးအတွက် အရင်ဆုံးလုပ်ပေးစေချင်တာက ဘာများလဲဗ ...
Posted Jul 31, 2012, 1:54 PM by lin ker
ရွှေမန်းက ဒီဆွေးနွေးချက်ထဲကတချို့ စကားလုံးတွေကိုကန့် ကွက်သတဲ့ ရွှေမန်းက ဒီဆွေးနွေးချက်ထဲကတချို့ စကားလုံးတွေကိုကန့် ကွက်သတဲ့ အသေအချာဖတ်ရှုလေ့လာ မှတ်သားထားသင့်တဲ့ ဦးမင်းသူ (ဥတ္တရ သီရိမဲဆန္ဒနယ်) ၏ယနေ့ ဆွေးနွေး သွား မှုများ Wed, 25/07/2012 လေးစားအပ် ပါသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီး နှင့် တကွ ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အထူးဧည့်သည်တော် များနှင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ခင်ဗျား။ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အကျိုးကို ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါးရွှင်လန်းကျန်းမာစွာနဲ့ထမ်းဆောင်ရွက်နိုင် ပါ ကြောင ...
Posted Jul 25, 2012, 3:45 PM by lin ker
Posted May 19, 2012, 6:07 PM by lin ker
u oat ta ma
ဦးဥတ္တမ အညတရ အကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၂၂) ဦးဥတ္တမ အရှင်ပညာနန္ဒ ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၂ ဘွဲ့တော် – ဦးဥတ္တမ သက်တော် – (၃၃) နှစ် အဖမ်းခံရစဉ်နေထိုင်သည့်ကျောင်း – သာလိုင်းကျောင်း၊ ငွေတောင်တိုက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ ။ မွေးရပ်ဇာတိ – စကားမြားကျေးရွာ၊ကနီမြို့ နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုဒ်မ – ၅ (ည) ၂၉၅ (က) (ခ) ၄၄၀ ချမှတ်ခံရသည့်ထောင်ဒဏ် – (၁၅) နှစ် ထောင်မှလွတ်သည့်နေ့- ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁ နေခဲ့ရသည့်ထောင် – မန္တလေးမြို့ ၊ အိုးဘိုအကျဉ်းထောင် • အဖမ ...
Posted Jul 20, 2012, 8:31 AM by lin ker
ခွဲခန်းထဲက ည သူ့ အလိုလို သတ်ပုံမှားနေတာက အမှန်တရားပါဘဲ ဗျာ အဘိဓါန်ကို ပြင်စရာမလိုပါဘူး တည်ရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးတာနဲ့ညဟာ လှပသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာသာဗေဒ စိတ်ပညာရှင် ဗေဒင်ဆရာ ဆရာဝန် အချွန် အတက် အယူဝါဒရဲ့ သားကောင် အခွင့်အရေးသမား အနုပညာ သာသနာပြု နိုင်ငံရေး ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာသူများက ခွဲစိတ် ဖြတ်တောက်လိုက်ကြတဲ့အခါ ည ဟာ ညကို မုန်းသွားတယ် ဒါပေမယ့် ည ဟာ ဘ၀တူ ညီမလေးတွေကို ချစ်တယ် ဘ၀တူ ညီလေးတွေ အတ ...
Posted Jul 14, 2012, 5:45 PM by lin ker
ဘခုိုင်ရဲ့အိမ်အပြန် by Kyaw Thet on Saturday, 21 April 2012 at 04:26 ·လေအဝှေ့ တွင်နွေ၏ အငွေ့ အသက်တို့ ဆွတ်ပျံ့ လာသည်။ နှစ် သစ်တနှစ်ကူးသွား ခဲ့ပြန်ပြီ။ သူမရောက်ဖူးဘဲ ကျော်လွန်သွားတတ်ကြသည့် နှစ်သစ်ကူးပွဲများလဲ မနည်း တော့။ အကြောင်းတခုမဟုတ် တခုနှင့် ဘခိုင်ဟာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ နှင့်လွဲနေကြ။ ပိတောက်ကြွင်းတွေ ရှိဦးမလား။ သူမ ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်ခဲ့သေးသလား။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လား။ ဒါမှ မဟုတ်တယောက်တည်းလား။ ဒီတခါ အိမ်က ...
Posted Jul 14, 2012, 2:51 PM by lin ker
ko myo aung naing
အရှေ့ ကြယ်မှ နောက်ကြည့်မှန်ကိုထုတ်ဝေမည်
Posted Jul 11, 2012, 1:54 PM by lin ker
Untitled Post ကိုအောင်နိုင် BurmaVJMedia on Apr 9, 2012 ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပြီး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့မှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် နဲ့ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ရလဒ်တွေ အပေါ် အခြေခံပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိအောင် အကောင်အထည်ဖော် သွားနိုင် တာ ဖြစ်ပြီး အဓိက မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လို ပြင် ဆင်ကြမလ ...
Posted Jul 11, 2012, 1:56 PM by lin ker
၆၂ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ၁၉၃၁ ခုနှစ်ကတည်းက ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ဝန်း အတွင်း တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက် အဦးကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ဦးဆောင်သည့် တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အစိုးရက မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ခဲ့သည့်အပြင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုကို ပြင်းထန်စွာ ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် ကျောင်းသားများစွာ အသက်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ယခုနှစ်သည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး မိုင်းခွဲဖျက်ဆ ...
Posted Jul 11, 2012, 6:55 PM by lin ker
အင်တာဗျူး RFA Burmese http://snd.sc/MLYeOe ဆဲဗင်းဂျူလိုင် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်ပေးခဲ့ တဲ့ ရန်ကုန် တက္က သိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံလိုက်ရတဲ့ ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ခေါ် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၇ ရက် သွေး စွန်းမှုဟာ ဒီနှစ်မှာ နှစ် ၅၀ တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဇူလိုင် ၇ ရက် အရေးတော်ပုံဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာ ၆၂ ခုနှစ် မေလ (၉) ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်တက ...
Posted Jul 7, 2012, 9:18 PM by lin ker
7 july 2012(ဧရာဝတီface to face)
Posted Jul 7, 2012, 9:06 PM by lin ker
si thu maung
တံတားနီ ၂၅ နှစ် ကျင်းပလို့ စည်သူမောင်ကိုတရားစွဲ The Myanma Age တံတားနီနေ့ ၂၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပခြင်းအပေါ်ကိုစည်သူမောင်အား တရားစွဲဆို ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၄။ တံတားနီနေ့ အခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် ပြည်လမ်းမပေါ်ရှိ အင်းလျား ကန်ဘောင်ပေါ် တွင် ပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်းခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (တ.က.သ) မှ ကိုစည် သူမောင်အား တရားဆွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ ကိုစည်သူမောင်မှ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကမာရွတ်မြို့နယ်(၉)ရပ်ကွက် အ ...
Posted Mar 24, 2013, 8:23 AM by lin ker
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့အမှတ်တရ Sithu Maung ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့အမှတ်တရအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကို ကျနော်တို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှဦးဆောင်ပြီးရွှာသာကြီးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာဒုတိယပါချုပ်နဲ့မော်ကွန်းထိန်းများကို တရားဝင်အသိပေးပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဧရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြားသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်အလိုက် (တ.က.သ)တွေ အနေနဲ့လဲကျောင်းအလိုက်က ...
Posted Mar 24, 2013, 8:22 AM by lin ker
u khun sai
A show of hands project Htein LinA show of hands project in front of Tate Modern toady with Ko Khun Saing who were in prison three time and his wife Ma Aye Aye Moe ...
Posted Apr 13, 2014, 2:44 PM by lin ker
ကိုခွန်ဆိုင်းရေးသားတဲ့ 7july အမှတ်တရသီချင်းတပုဒ်
Posted Jul 7, 2012, 7:21 AM by lin ker
Posted Mar 18, 2013, 7:27 AM by lin ker
ko phyo min thein
လွှတ်တော်ကို ရောက်ရှိလာတာက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပါ ၊ နိုင်ငံရေးကစားကွက်ထဲကို လာတာ မဟုတ် ပါ ဘူး "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌတို့ တွေ့ဆုံတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ဒီနေ့ တင်သွင ...
Posted Jul 15, 2012, 12:39 AM by lin ker
ပြည်သူတို့ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးမဟာ အခွင့်ရေးကြီး ပေါ်လာပြီ Tun Wai (၁)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတကြီး အိုဘားမားသည် လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် 11 တွင် နေပြည ...
Posted Nov 7, 2012, 7:15 PM by lin ker
dr kyaw kyaw
Untitled Post Published On: Thu, Jul 5th, 2012 ရုပ်သံသတင်း | By Admin မြင်းခြံထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ အညတရ ဆုရှင် ဒေ ...
Posted Jul 8, 2012, 7:53 PM by lin ker
အင်တာဗျူး Burma VJ Media Network အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရေတာရှည်မြို့နယ် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွှတ်တော်က ...
Posted Mar 20, 2013, 3:32 PM by lin ker
ဒေါက်တာကျော်ကျော် ကျန်​နေတဲ့​ ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်​ အကျဉ်း​ကျသူ​တွေကို လွှတ်​ပေး​ပါ (​ဒေါက်တာ​ကျော်​ကျော်နှင့် မေးမြန်းခန်း)မြင်းခြ ...
Posted Jul 4, 2012, 8:12 AM by lin ker
naing myo thway
မွန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း နိုင်မျိုးသွေး (ခ) နိုင်ချင်းဂကောင်း ရဟန်းခံပွဲ
Posted Jul 5, 2012, 1:58 PM by lin ker
သေဒဏ်ကျရာမှ လွတ်မြောက်လာသူ နိုင်မျိုးသွေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း by Yangon Press International on Friday,4May 2012 at 05:53 ·မေလ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-ဟံသာ(YPI) “ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအရေ ...
Posted May 26, 2012, 11:59 AM by lin ker
tar kaw d
Untitled Post Nay WaiSubscribe · 11 minutes ago မနတလေးမှ ရောက်လာသော ရှေ့နေကွန်ယက်မှ ဦးသိန်းသန်းဦး(တရားလွှတ်တော်ရေ ...
Posted Aug 22, 2012, 7:33 PM by lin ker
ဒဏ်ရာရနေတဲ့ အနမ်းများ မှသည် ဒဏ်ရာရနေတဲ့ အနမ်းများ မှသည် Written by တာကောဒီ	Friday, 06 July 2012 21:50	5Share ၁၉၇၆ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် က ...
Posted Jul 6, 2012, 11:25 PM by lin ker
ပညာဒါနကျောင်းတွင် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ကို ကျော်ကိုကို မှ ဟောပြောစဉ် Kyaw Swar Myintမျိုးဆက်သစ် ( ဗ.က.သ ) များရဲ. အာဇာနည်နေ.ဂုဏ်ပြုခြင်း .................................. ... ပညာဒါနကျောင်းတွင် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် (ဗဟိုလုပ်ငန်ကော်မတီ) ဥက္ကဌ ကို ကျော်ကိုကို မှ ဟောပြောစဉ်။ Phyoe Phyoe Aung
Posted Mar 10, 2013, 4:38 PM by lin ker
အင်တာဗျူး Ant Bwe Kyaw6 July ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သော7July နှစ် ၅၀ ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကျော်ကိုကို မှ စကားပြောကြားစဉ်Ant Bwe Kyaw7 July7July အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးပြီးနောက် ဗကသ နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဆက်လက်ကျင်းပ
Posted Sep 16, 2012, 7:05 AM by lin ker
နာရေး နာရေး မလေးလေးမွန်(ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) ၁၉၉၆ ၏ ဖခင်သည် ၂၃ .၁. ၂၀၁၃ နေ့ တွင် ကွယ်လွန်သွားခ ...
Posted Jan 28, 2013, 4:54 PM by lin ker
7 july Messenger News Journal ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဧ။်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းတွင်ကျင်းပသော ဇူလိုင်(၇)အခမ ...
Posted Jul 6, 2012, 11:19 PM by lin ker
သံတိုင်ကြားကမွေးနေ့မလေးလေးမွန် လေးလေးမွန် သံတိုင်ကြားကမွေးနေ့့ ဘ၀ကတစ်ခဏပါ ဒါပေမယ့် …ခရီးရှည်နဲ့ခရီးကြမ်းတို့ ...
Posted Jul 15, 2012, 1:50 PM by lin ker
Posted Apr 13, 2014, 7:13 PM by lin ker
အတိတ်ထွန်ခြစ်ကြောင်းများ အခုတစ်လော ငယ်ဘ၀အကြောင်း သဲသဲမဲမဲ ဖတ်မိတယ်… အကောင်းစား သားရေကွင်း အဖေရွေးပေးတယ် အဖေ့ကိုခ ...
Posted Apr 6, 2013, 4:44 PM by lin ker
လွှတ်ချခဲ့သော မျှော်ငေးခြင်းများ သိမှီသလောက်နဲ့ပြန်တွေးရင် တောအုပ်တစ်အုပ် မြူတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့သော တောင်တန်းများ ဖုန်ထနေတ ...
Posted Mar 31, 2013, 4:21 PM by lin ker
ဧရာဝတီတိုင်းမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုသိန်းဆွေနှင့်အင်တာဗျူး ဧရာဝတီတိုင်း ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်အတွေ့အကြုံ ဦးသိန်းဆွေ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်အမတ် - (Photo credit - ကိုသိန်းဆွေ Facebook) လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းဆွေနဲ့ မေးမြန်းခန်း နားဆင်ရန် ကိုသားညွှန့်ဦး 01.07.2013 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  လွှတ်တော်တွေအတွင်းမှာ လွှတ်တော်အမတ်တဦးအနေနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ထိ ထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျောထောက်နောက်ခံပြု အထောက်အပံ့တွေ နည်းပါးနေ ...
Posted Jul 31, 2013, 10:34 AM by lin ker
မှတ်မိသလောက်... by Nay Lin ဒီကျန်ခဲ့တဲ့ရက်ရှည်ရုံးပိတ်ရက်တွေက emotional ဖြစ်တဲ့ရက်တွေလို့ပြောလို့ရမယ်..ကျန်ခဲ့တဲ့ ၁လလောက်က FBကနေ ကိုသိမ်းဆွေကြီးက သူဒီရောက်နေတယ် ဆက်သွယ်ပါ တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာအားရဖုံးဆက်ဖြစ်တယ်..ဒီ ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကို ကျနော့်ဆီလာပါဆိုတော့မင်းပဲလာပါကွာ..ငါဒီမှာ အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေလို့ဆိုတာနဲ့သွားဖို့စီစဉ်ဖြစ်တယ်..မတွေ့ရတာ နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်ပြီလေ.. မိန်းမဖြစ်သူကလည ...
Posted Jul 31, 2013, 10:33 AM by lin ker
လှိုင်းမကြောက်သူများ “ ညီမလေးက... ဒီ .. ခွပ်ဒေါင်း ရင်ထိုးလေးကို ဘာလို့ ထိုးထားတာလဲ..” စူးရှရှ မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြုံးဟဟ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းကြောင့် ၊ အကျီ င်္ ကော်လာလေးကို မသိမသာ ဖိကိုင်ရင်း ၊ အနည်းငယ် လန့်သွားမိ တာတော့ ၀န်ခံပါတယ်။ အဲဒီနေ့က..... လှိုင် တက္ကသိုလ် ရဲ့ ကျောင်းဖွင့်စ ရက်တရက်......။ အရေးတော်ပုံကြီး ပြီးခါစ......။ လှိုင်းလုံးကြီးတွေ ငြိမ်သက်ပြီး လှိုင်းပုတ်သံ သဲ့သဲ့သာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၊ မုန်တိုင်း စဲကာစ ကမ်းခြေ သောင်ပြင် တခ ...
Posted Jul 31, 2013, 10:45 AM by lin ker
Honorable (U) Thein Swe, Member of the Amyothar Hluttaw(Upper House),Myanmar (U) Thein Swe , 46-year old, isamember of the Amyothar Hluttaw (Upper House). He isayouth leader of the National League for Democracy(NLD) and was elected from the Irrawaddy (Ayeyarwaddy)Region in the by-election held on April 1, 2012. He is alsoaformer political prisoner, served about ten years in prison. His father was U Myint Swe,amember of parliament elected in the 1990 elections representing the NLD.(U) Thein Swe actively participated in the 1988 popular democracy uprising in his home town,Pyar Pone in the Irrawaddy region, asastudent leader. He was sentenced to 10 years imprisonment byasummary court in 1990 for his role in organizing student protests ...
Posted Aug 5, 2013, 12:59 PM by lin ker
အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဖရန်စစ် ဖူကူယားမား Francis Fukuyama နှင့် Mizzima မဇ္ဈိမ 23 August 2012 အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဖရန်စစ် ဖူကူယားမား Francis Fukuyama နှင့် သူ၏စာအုပ်များက ...
Posted Apr 7, 2013, 6:34 AM by lin ker
ဆရာဦးကျော်ဝင်း ရဲ့ ဟောပြောပွဲ Hla Tun Khine ဒီကနေ့ ၅.၁.၂၀၁၃ နေ့ UMFCCI မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဦးကျော်ဝင်း ရဲ့ ဟောပြောပွဲကို ပရိသတ် (၄၀၀ ...
Posted Jan 6, 2013, 9:21 AM by lin ker
လှုံဆော်နေကြတဲ့ အင်အားစုတစ်စု အသေအချာကိုရှိနေပါပြီ ဘာဖြစ်ချင်မှန်း၊ ဘာလိုချင်မှန်း၊ ဘာ့ကြောင့်မှန်း သေသေချာချာမသိရပေမယ့် ... ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ မတည်မငြိမ် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ရန်လိုသတ်ဖြတ်ကြတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်သွားအောင် လူအင်အား၊ ငွေအင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ လိုက်လံလှုံဆော်နေကြတဲ့ အင်အားစုတစ်စု အသေအချာကိုရှိနေပါပြီ။ သတင်းတွေ ပြန့်ပြီး အလန့်တကြားတွေဖြစ်ကြ မှာစိုးရိမ်လို့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ပြည်သူ့ သတင်းသမ ...
Posted Apr 3, 2013, 7:02 PM by lin ker
Posted Nov 18, 2012, 8:41 AM by lin ker
သတင်းသမားနဲ့အာဏာပိုင်အကြားနားလည်မှုအကြောင်း စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှ ကိုဇော်သက်ထွေး အင်တာဗျူး Published on Nov 24, 2012 by BurmaVJMedia သတင်းသမားနဲ့အာဏာပိုင်အကြားနားလည်မှုအကြောင်း စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှ ကိုဇော်သက်ထွေး အင်တာဗျူး
Posted Nov 25, 2012, 5:04 PM by lin ker
ဇော်သက်ထွေး ၏ ကြမ်းတမ်းသောစစ်ပွဲ နှင့် နူးညံသော နှလုံးသား, အပိုင်း (၂) တစ်နေကုန်လည်း တဘုတ်ဘုတ်နှင့် ယင်မသတ်ရတော့။ ညနေစောင်းတွင့် သူ့အမည်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသော ယင်သတ်မှတ်ကောင်ရေ အထုပ်တစ်ထုပ် ရောက်လာသည်။ ထိုအထုပ်ကို ဘုတ်ကိုင်လက်ထဲ အပ်လိုက်ရုံပဲ ဖြစ်သည်။ယင်းအထုပ်ထဲမှ ယင်များကို လိုင်စင်မဲ့ ယင် ဟုခေါ်ပါသည်။ ............. ကို ဆက်ဖတ်ရန်............... လက်ကောက်နှင့်ဘောက်ချာအကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ ဆေးရုံများတွင် AIDS ဝေဒနာရှင်များ၊ HIV ပိုးရှိသူများ တီဘီရောဂါ ဝေဒနာရှင်များဖြင့် အမြဲလိုလ ...
Posted Nov 18, 2012, 9:12 AM by lin ker
နာရေး Burma VJ Media Network ၁၃၇၄ ခု၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆုတ် (၈) ရက်၊ ၁၀.၈.၂၀၁၂ သောကြာနေ့ နံနက် (၄)နာရီ (၃၀) မိနစ် အချိန ...
Posted Aug 11, 2012, 3:41 AM by lin ker
yebaw pho than chaung
“လူထုဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်တဲ့ သတ္တိတွေနဲ့ ပိုင်းဖြတ်ချက်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်” ကိုပေါက်	| တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၈ မိနစ်	(၂၀၁၂ နိုင်ငံရေး နိဂုံးချုပ်ချက်) ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း နှင့် အင်တာဗျူး နှစ်တနှစ်သည် ခေတ်တခေတ်၏ အစိတ်အပိုင်းလေး တခုမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း အရေးကြီးသော အဖြစ်အပျက်များသည် နှစ်တနှစ်တွင် များမြောင်လှတတ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းတွင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ အာဏာရလာခဲ့သည့် တနှစ်ပြည့် အစိုးရ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ခဲ့သည့် အမ ...
Posted Jan 14, 2013, 1:32 PM by lin ker
“၈၈၈၈ အပေါ် သစ္စာရှိမရှိဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ စံတခုဖြစ်တယ်” ကိုပေါက်	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၈ မိနစ်	ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း(ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ၈၈၈၈ ခေါ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ပေါ်ပေါက်လာချိန်သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ)၏ တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် တိုင်းပြည်အား အုပ်ချုပ်နေချိန် ဖြစ်သည်။တနိုင်ငံလုံး ဒီမိုကရေစီတောင်းဆို အုံကြွကြသည ...
Posted Aug 8, 2012, 5:49 PM by lin ker
ပျော်စရာ - ၁ မြဝဿန်ရေ… ဒီရက်ပိုင်း နင့်ကို ငါပြောပြတာတွေက ထောင်ထဲမှာ၊ စစ်ကြောရေးမှာ ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ပဲဖြစ်နေတာ သတိထားမိ ပါတယ်။ တကယ်တော့ ထောင်ထဲမှာ ငါတို့ နည်းငါတို့ ဟန်နဲ့ ပျော်စရာလေးတွေ လဲရှိပါတယ်။ ငါတို့ အတွက်ပူပန်နေတဲ့ မိသားစုတွေ၊ ချစ်သူတွေ ဒီ အုတ်ရိုးကြီးအပြင်ဘက်မှာ ရှိနေမယ် လို့ သိပေမဲ့ အချိန်တိုင်း ငါတို့ ပူဆွေးမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ငါတို့ ထောင်ထဲမှာ နေရတဲ့ အချိန် တွေ ဆိုတာလဲ ငါတို့ယ ...
Posted Aug 7, 2012, 8:16 PM by lin ker
စစ်ကြောရေး by Aung Kyaw Moe on Friday, 27 July 2012 at 16:47 ·မြဝဿန်ရေ…တကယ်တော့ သိပ်မလွယ်လှဘူး ။ အချိန်က နေလည် ၂ နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ စစ်ကြောရေးလုပ် ဖို့ အတွက်အခန်း ကလည်း နေရာမရှိတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ ငါ့ကို အစည်းဝေးခန်းမထဲ က နောက်ဘက်ကျကျ စားပွဲတစ်လုံးမှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ငါတည်းတဲ့ နေရာက သိမ်းလာတဲ့ ပစ္စည်း တွေရယ် မနက်ပိုင်း ငါ့ကိုဖမ်းတုန်းက သိမ်းထားတဲ့ ဖုန်းရယ်၊ ပိုက်ဆံရယ် ကို စားပွဲပေါ် တင်ထားတယ်။ ပထမဆုံး ငါ့ ရ ...
Posted Jul 28, 2012, 7:27 AM by lin ker
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွှင်း by Aung Kyaw Moe on Thursday, 14 June 2012 at 19:22 ·အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ တိုက် (၄) ၊ အခန်း (၅) မှာ နေတုန်းက ရေးထားတဲ့ ကဗျာပါ။ကိုယ်တိုင် ဖန်ုးဆင်းထားတဲ့ အလင်းရောင်ပြပြနဲ့ဘဝကို လုံးဝ အမှောင်မကျ အောင်ပျိုးထောင်နေ ရတဲ့ အချိန်လဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကိုကိုယ် အမှန်တရားနဲ့အနီးဆုံး နေရာကို ပို့ ထားနိုင်တဲ့ ဘဝရဲ့ အဆစ်အပိုင်းတစ်ခု ရဲ့ အမှတ်တယပါ။ဆန့် ကျင်ဘက်တို့ ရှေ့ မှာ ထီမထင်နေထိုင်ရင်း အားငယ်မှုကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် သိုဝှက်ထားရတဲ့ အခ ...
Posted Jul 14, 2012, 5:14 PM by lin ker
ကုလားလေး by Aung Kyaw Moe on Saturday, 14 July 2012 at 18:07 · မြဝဿန်ရေ.... ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့နေ့ လည် ၃နာရီလောက်မှာ ငါတို့ ကို အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေ့ငါတို့ ကို ခွဲချုပ်ထားတဲ့ အချုပ်တွေ ဆီကို ပြန်မပို့တော့ ပဲ အင်းစိန်ထောင်မကြီး ကို ပို့ လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း နာမည်စာရင်းကောက်တာ၊ အမှုဖြစ်စဉ် အကျဉ်းမေးတာတွေ လုပ်ပြီး တာနဲ့သတင်း တပ်ဖွဲ့ တာဝန်ခံတွေ နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေ တိုင်ပင်ပြီး ငါတို့ ကို နေရာတွေ ခ ...
Posted Jul 14, 2012, 5:08 PM by lin ker
အမျိုးသားရေးဆိုတာ နှစ်ခါတွေးရသတဲ့လား by Myo Set on Wednesday, 1 August 2012 at 12:10 ·ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့ ညီမဆိုသူက ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခပ်ပါးပါးထည့်ပြီး "ပုတ်" ပြလိုက်တဲ့ စာကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ သူ့စာထဲမှာ ပထမဆုံးမြင်ရတာက စစ်အာဏာရှင်တွေ နှိပ်စက်လိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပါပဲ။ သူ့အကို သေဒဏ်၊ သူက ထောင်ကိုးနှစ်၊ သူ့မောင်က ထောင် ၇ နှစ်၊ သူ့မိဘတွေက ထောင်ငါးနှစ်စီ ဆိုပြီး စ ...
Posted Aug 7, 2012, 1:29 PM by lin ker
ကိုကိုကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ(မလှမြိုင်-ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး၏ညီမတော်) ကိုကိုကြီးရှင့် အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ကျမကတော့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု၊ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကို ဦးဆောင်ရင်း စစ်အစိုးရရဲ့ကြိုးပေးကွပ်မျက်မှုခံလိုက်ရလို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ (၁၉၇၄- ၁၉၇၆ မျိုး ဆက်) ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆလိုင်း ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ ညီမ မလှမြိုင် (ခေါ်) မိုင်ပိုပို တင် ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျမတို့ မိသားစု အကြောင်းကို ကိုကိုကြီး ကြားဘူးကောင်း ကြားဘူးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ် ပြန်ပြီး မ ...
Posted Aug 1, 2012, 1:52 PM by lin ker
မွေးနေ့18 December 2012 19:51သုခရိပ်မြုံ ပရဟိတဂေဟာ မှ ကိုကိုကြီးရဲ့ မွေးနေ့အလှူ။ ( ရုပ်သံ )
Posted Dec 18, 2012, 5:47 PM by lin ker
At Paris, 13 October 2012. Ko Ko Gyi (The 88 Generation Students)At Paris, 13 October 2012.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=547004711992663&set=a.547004611992673.144009.531873223505812&type=1&theater
Posted Nov 11, 2012, 3:28 PM by lin ker
5 september 2012(လယ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ စည်းရေး) မစုစုနွေးနဲ့ မေးမြန်းချက် by RFA Burmese
Posted Sep 6, 2012, 3:22 PM by lin ker
အလုပ်သမားအရေး ဆွေးနွေးပွဲ အလုပ်သမားအရေး ဆွေးနွေးပွဲ by RFA Burmese ဆွေးနွေးပွဲ တက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမား လယ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူ မစုစုနွေးက ...
Posted Aug 22, 2012, 7:23 PM by lin ker
ဗေဒါကျောင်းမှာ လှိုင်သာယာမြိုနယ်၊အဆင့်မြင့်(၆)ရပ်ကွက်ရှိ ဗေဒါအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းလေး၏ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပ
Posted Aug 4, 2012, 5:35 AM by lin ker
ma khin nyein thit
နေ့စွဲပျောက်နေသော သက္ကရာဇ်များ နေ့စွဲပျောက်နေသော သက္ကရာဇ်များ =================== ထောင်ဆိုနေ့စွဲပျောက်နေသော သက္ကရာဇ်များတာ နံရံလေးဘက် အလယ်က ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ဧရိယာလေးကို ခေါ်တာပါ။ ထောင်ထဲမှာ သတင်းစကား မရှိ၊ မေတ္တာတရား ဆိုတာ ရှားပါးပစ္စည်း၊ လတ် ဆတ်မှုဆိုလို့ လေတောင်မှ မရှိတဲ့နေရာပါ။ အဲဒီ နေရာမှာ လူ ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။ ပထမ တမျိုးက တကယ့် လူဆိုး လူမိုက်၊ ဒုတိယ တမျိုးက တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ တရားစီရင်ရေးကြောင့် ထောင် ထဲကို ရောက်နေ ရတဲ့လူတွေ၊ နောက် တမျိုးကတော့ ယ ...
Posted Aug 4, 2012, 8:22 AM by lin ker
Untitled Post ကြယ်တွေကြွေနေတဲ့တိုင်းပြည် ကြယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင်ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ နေရာဟာ မြင့်မားတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးပဲ။ ရာသီဥတု ကြည်လင်တဲ့ ညတွေဆိုရင် အရောင်လက်နေတဲ့ ကြယ်တွေဟာ စိန်တွေလိုပဲ တဖျပ်ဖျပ် လက်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြသလို၊ မြင်လည်း မြင်ဖူးကြပါတယ်။ ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့လူငယ်များစွာဟာလည်း ကြယ်တွေလိုပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း အထင်အရှားရှိကြတယ်။ ဉာဏ်ပညာ ထက်မြက် တယ်။ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားကြတယ်။ ဒါပေမယ ...
Posted Jul 27, 2012, 7:58 PM by lin ker
ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စာပေတွေကို ထိန်းသိမ်းခွင့်တွေ မရမချင်းတော့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး DVB TV News 8 February 2013 07:35ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စာပေတွေကို ထိန်းသိမ်းခွင့်တွေ မရမချင်းတော့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Posted Feb 8, 2013, 4:26 PM by lin ker
Untitled Post Mae Tao ClinicDr Cynthia and fellow activists from Burma received the NED 2012 Democracy Award inaceremony held in Washington D.C. yesterday. Dr Cynthia also had the chance to meet Daw Aung San Suu Kyi for the first time! More photos are on our website: http://maetaoclinic.org/1523/photos-from-the-ned-2012-democracy-award-ceremony/
Posted Sep 20, 2012, 10:21 PM by lin ker
ko phone thet pai
ကိုထိန်ဆွဲပေးတဲ့ပုံတူ ဘုန်း သက် ပိုင်၂၀၀၂ မြောင်းမြထောင်မှာ အတူနေခဲ့ကြစဉ်က ပန်းချီထိန်လင်းHtein Lin ကျနော့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ ...
Posted Mar 20, 2013, 5:28 PM by lin ker
နာရေးကအပြန် ကိုကိုမြင်.၊ကျော်စွာ၊ကိုမောင်မောင်လတ်။ကိုစိုးသောင်းအဖေနာရေး ရေဝေးကအပြန်
Posted Mar 11, 2013, 5:46 PM by lin ker
ကိုရဲမင်းဦးရုံးထုတ် DVB TV News ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ) ဝင် ကိုရဲမင်းဦးကို အနောက်ပုိုင်းခရုိုင ...
Posted Apr 4, 2013, 7:02 PM by lin ker
ကိုရဲမင်းဦးရုံးထုတ်စဉ် Published on Apr 4, 2013 မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ညကတည်းက ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လူပျောက်အမှတ်စဥ ...
Posted Apr 4, 2013, 7:01 PM by lin ker
Posted Jul 27, 2013, 11:09 PM by lin ker
ဘောလုံးသမား သူငယ်ချင်းများ -------------------------------- (ရေး - မင်းကိုနိုင်) ပိုးကုန် အချိန်ကုန် စောင်းတီးသင်ဖို့ အခွင့်မကြုံသမျှ ငါတို့လက်တွေ မိုးစက်တွေကို ဆုပ ...
Posted Jan 26, 2013, 7:54 AM by lin ker
ကလေးချစ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်.... PhotoKyaw Zawကလေးချစ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်.....(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Cotabato City လေဆိပ်အမှတ်တရ.....၊)
Posted Jan 19, 2013, 12:56 AM by lin ker
ကျနော်ဒုက္ခသည်(၉) ။ ရေးသူ - မောင်အေးဝင်း(လမင်းတရာ)by Aye Win on Monday,6August 2012 at 13:14 ·မြိန်ရာဟင်းကောင်း-ခင်ရာဆွေမျိုး ကိုမြင့်လှိုင်နဲ့ အကြောင်းပြုပြီး ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်ကြွယ်၊ ဒေါ်ခင်ပြုံးတို့ မိသားစု နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အလံအောက်မှာ လက်တွဲလို့ ရသူတွေ ဖြစ်တယ်။ အေဘက်တက္ကသိုလ် ၀င်းထဲမှာ နေကြတယ်။ သူတို့ဆီ ရောက်သွားရင် နိုင်ငံရေးအကြောင်း၊ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောလို့ကို မက ...
Posted Aug 6, 2012, 7:49 PM by lin ker
ကျနော်ဒုက္ခသည် (၈) ။ ရေးသူ - မောင်အေးဝင်း (လမင်းတရာ)by Aye Win on Thursday,2August 2012 at 13:09 ·ဘီယာသောက်ဖော် ဒေါ်ခိုင်ခေါက် ကျနော်တို့ အောက်ထပ်မှာ ထိုင်း-တရုတ် ထမင်းဆိုင်တဆိုင် ရှိတယ်။ ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးကို ထိုင်းတွေက ခိုင်ခေါက်(ထမင်းရောင်းသူ)လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ကျနော်လဲ သူတို့ ခေါ်သလိုပဲ ခိုင်ခေါက်လို့ ခေါ်လိုက်တယ်။ သူ့ယောက်ျားက ပုတီးစိပ်တဲ့ ဘုရားတရားသမား။ ခိုင်ခေါက်က ဘီယာသောက်တယ်။ တခါတလေ ဖဲရိုက်တယ်။ တိုက ...
Posted Aug 6, 2012, 7:48 PM by lin ker
ကျနော်ဒုက္ခသည် (၆)၊ ရေးသူ - မောင်အေးဝင်း (လမင်းတရာ)by Aye Win on Monday, 30 July 2012 at 14:10 ·ကုလားအုပ်နဲ့အာရပ် ၁၉၉၀ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်၊ မနက် အိပ်ရာကနိုးခါစမှာ တယ်လီဖုံးတခု ၀င်လာတယ်။ "ကိုအေးဝင်း....ညိုညို(ညိုအုန်းမြင့်)ပါ...ကျနော် အခုချင်းမိုင်ကားဂိတ်က ဖုံးဆက်တာ....သားကြီး (သာကျော်ဝေ-ယခုအမေရိက) နဲ့ ကျနော် ကိုအေးဝင်းတို့နဲ့ တပါတ်လောက်နေလို့ ရမလား...""ရတယ်လေ...ဘာဖြစ်လို့လဲ""ကိုမောင်(ဗိုလ်ကြီးဟောင်းသန့်ဇင်မြိုင်)နဲ့ ကျနော်နေတာ သ ...
Posted Aug 6, 2012, 7:47 PM by lin ker
ကျနော်ဒုက္ခသည် (၁) အပူသည်၊ သဘင်သည်၊ ခရီးသည်၊ ဧည့်သည်......စတဲ့ " ....သည်" တွေအများကြီးထဲမှာ၊ ကျနော်က "ဒုက္ခသည်" ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ ၊ ရာ့ဂ်ျချဒါမ်နွန်လမ်း (Thanon Ratchadamnoen) မှာရှိတဲ့ "ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး" (United Nation High Commissioner of Refugees- UNHCR) က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဒုက္ခသည်။ ဒီဘ၀ကို ရောက်လာခြင်းအစက ဒီလို........ ပြေးပြေး အားမနာနဲ့..... ၁၉၈၉ ဇူလိုင်လ ၁၁ရက် မှာ၊ မနက်အစောကြီး လေးနာရီလောက်က၊ မရမ်းကုန်း ၈ မိုင်က ကျနော့အိမ်ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ လ ...
Posted Jul 14, 2012, 5:10 PM by lin ker
lu du sein win
Untitled Post လူထုစိန်ဝင်း Ludu U Sein Win, one of Burma's most respected journalists and an outspoken critic of the regime, was arrested in 1967 and sentenced, without trial, to 13 years in prison for his political writings. He was jailed in Insein and Coco Island. He was released in 1976, but re-arrested almost immediately and jailed forafurther four years. He sufferedastroke in prison and despite being paralysed in his right side, he continues to defy the regime, writing two articlesaday under different pseudonyms. Zar Gana is Burma's most famous comedian, actor and film director. Previously imprisoned several times for his political activities, he was arrested in June 2008 for ...
Posted Jul 22, 2012, 7:55 AM by lin ker
လူထုစိန်ဝင်း (သို့မဟုတ်) သူရဲကောင်း သတင်းစာဆရာ မောင်စွမ်းရည် ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၂ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား … ကျနော် ဒီနေ့ ပြောချင်တာကတော့ ဇွန် ၁၇ က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းအတွက် နှုတ်ဆက်ဂုဏ်ပြုစကား ဖြစ် ပါတယ်။ လူထုစိန်ဝင်းဟာ မန္တလေးလူထုသတင်းစာ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်မှာ ထွန်းချွန်ထင်ရှားတဲ့ သတင်းစာဆရာတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ (သူနဲ့ အတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လူထုမောင်သစ်လွင်နဲ့ နတ်မောက်ထွန်းရှိန်တို့လဲ မန္တလေးမှာ သက်ရှိထင ...
Posted Jul 10, 2012, 9:01 PM by lin ker
သူမသေတော့ပါ။ သူမသေတော့ပါ။ ရေးသူ - ရဲဘော်စိုးချစ် (၁) ကျနော်တို့ ပုံမှန်ဂျာနယ် ၃-၄ စောင်၊ သတင်းစာက တစောင်နဲ့ မဂ္ဂဇင်း ၃-၄ အုပ် ယူထားပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ Weekly Eleven ပါတယ်။ ဦးတည်ရန်သူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ် အမြဲဆဲမယ့် Northern Star ပါတယ်။ မဖတ်မဖြစ် ဖတ်ရဦး မယ့် ဒီလှိုင်းလည်းပါ ပါတယ်။ တခါတရံ ဂယက်ပွက်လာတဲ့ သတင်းတို့ ဆောင်းပါးတို့ပါတဲ့(စာနယ်ဇင်းတွေ) ပေါ်လာရင် မရမက မှာဖတ်ကြတယ်။ Weekly Eleven ဖတ်တာက အချက်အလက်လိုချင ...
Posted Jul 2, 2012, 8:32 PM by lin ker